ပုရွက်ဆိတ်တွေသြစတေးလေဆိပ် Hamilton က YHML DOWNLOAD FSX - Rikoooo
ပုရွက်ဆိတ်တွေသြစတေးလေဆိပ် Hamilton က YHML FSX
downloads ရယူရန္6774
ဗားရှင်း 10, Compatibility ကိုမှ updated auto-indtaller P3D
ကြောက်မက်ဘွယ်သောလေဆိပ် likes သူအလက်တို့ကိုချီ! သငျသညျမယ်ဒါကြောင့်ကောင်းပြီဒီလေဆိပ်တော်တော်လေးသူကပြောတယ်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ကသငျသညျမဟုတျပါလိုသလား?
အဆိုပါလေဆိပ်တစ်ခုတည်းသော default အနေနဲ့ object ကိုတဦးတည်းလှေကားဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူအမှန်တကယ်လေဆိပ်ဓါတ်ပုံများပေါ်တွင်အခြေခံထုံးစံလုပ် 3D တ္ထုပါရှိပါတယ်။ လေဆိပ်ပတ်လည်မှာ photoreal မြေပြင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ approx 40 စတုရန်းကီလိုမီတာလည်းပါဝင်သည်။
Hamilton ကအ Grampian MTS မှအနောက်ပိုင်းဗစ်တိုးရီးယားနီးကပ်တွင်တည်ရှိသည်။ အဆိုပါလေဆိပ်တစ်ခုကျောက်စရစ်လက်ဝါးကပ်တိုင်လေယာဉ်ပြေးလမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် lit အဓိကလေယာဉ်ပြေးလမ်းရှိပါတယ်။ အက်ဒလိတ်မြို့နှင့်မဲလ်ဘုန်းမြို့မှပုံမှန်ခရီးသည်န်ဆောင်မှု Metro တစ်ရေယာဉ်စုနှင့်အတူ Sharp ကလေကြောင်းလိုင်းကလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
လေဆိပ်သွားဖို့၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်မန်နေဂျာကိုသွား FSX နှင့်အမျိုးအစား YHML ICAO အာကာသအတွင်း
ပြည်နယ် / ခရိုင်: ဝိတိုရိယ
City: Hamilton က
လေဆိပ်အမည်: Hamilton က Aero
မြင့်: 3.962m, 13 ပေ
10 / 28: 1233m 30m နီကျောက်စရစ် x
17 / 35: 1404m x ကို 30m
ATS Community Facilities:
ရေဒီယို Navigator နှင့်မြေယာအေအိုင်ဒီအက်စ်: